Hack မခံရလေ အောင် ကာကွယ်ခြင်း ~ IT SuBoo
IT SuBoo Apk
IT Only Apk
IT စာပေ Apk
Weather SuBoo Apk
Health SuBoo Apk
Andorid APK အလွယ်လုပ်နည်း (1)
Android app (226)
Android App ရေးနည်း (4)
Android Code (3)
Android Font Installer (6)
Android Universal Code (1)
Android ပြဿနာ (5)
Android အတွက် သင်ခန်းစာ (5)
Audio Booster (1)
Bagan Keyboard Pro (5)
Call Locator (1)
Candy Crush Hack apk (2)
Channel7 Live TV (1)
Diary App (1)
Drum apk (1)
English Learning Apk (1)
Fake Phone Number (1)
Fast Facebook (2)
Fast Pro (1)
Fast Share (1)
FB Downloader (2)
FM App (1)
Frozen Zawgyi Keyboard (1)
G510 MMFont (2)
G610 MMFont (1)
Google Drive app (1)
Gtalk Bot code (1)
Hard Reset Tool For Android (1)
Health Suboo apk (2)
Health SuBoo Herbal book apk (1)
HipHopBestSelection Apk (1)
Huawei official Firmware (1)
Huawei official Firmware တင်နည်း (2)
Huawei Themes With MMFont (2)
IDM Plus For Android (1)
Internet Speed Up (4)
IT Suboo (IT Only) apk (1)
IT SuBoo Apk (3)
IT စာပေapk (1)
IT စုဗူး apk (1)
JellyBean တွေမှာမြန်မာစာမှန်အောင်လုပ်မယ် (4)
Klyph Pro for Facebook (1)
lottery SuBoo (1)
love Frames apk (1)
MMFont For Samsung (1)
Mobile Doc Scanner (1)
Mobile Guide (3)
Mobile Print apk (1)
Movie apk (1)
mp3 Tag (1)
MRTV LIVE တိုက်ရိုက်ကြည့်နည်း (2)
MRTV4 LIVE TV (1)
Myanmar facebook (1)
Myanmar First Aid (1)
Myanmar Zodiac apk (1)
Myket app store (1)
NayZawLin FB apk (1)
Nero Buring (2)
Net Guide (3)
ONE Browser (1)
PC Fixer (1)
Perfect Root (1)
Photo Funia (1)
Radio app (1)
Root APK (3)
Root Tool (13)
Samsung Zawgyi Enabler (1)
Screenshot HD Apk (1)
Sim Simi (1)
Skynet ရုပ်သံကြည့်နည်း (1)
Smart Gapps Installer (1)
Smart Remote for Galaxy S4 (1)
smart zawgyi3 (1)
Smurfs' Village (1)
Sony Font Installer (1)
Sound Clouder (1)
Suboo apk (1)
SuBoo Apk Downloader (1)
SuBoo Root Pro (1)
SuBoo Root Tool (1)
system app remover (1)
virus solution (2)
Vplayer apk (1)
VZO Apk (1)
VZO Portable (1)
Weather SuBoo (1)
Window Softwares (47)
Youtube Downloader app (1)
zawgyifont for iOS7 (1)
ကွန်ပူတာမှ apk များဒေါင်းယူနည်း (1)
စုဗူး ဟင်းချက်နည်းများ apk (1)
မြ၀တီ တိုက်ရိုက်ကြည့်နည်း (3)
မြန်မာ Gtalk (1)
အချစ်ဗေဒင် EXE (1)
Copyright by IT SuBoo 2013. Powered by Blogger.
Hack မခံရလေ အောင် ကာကွယ်ခြင်း
6/12/2013 နည်းပညာများ No comments
Run box မှာ compmgmt.msc လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့
computer management (local)/system tools
/share folders/shares ကို သွားကြည့်လိုက်ပါ ညာဘက် box ထဲမှ
file များနောက် မှာ $ ပါနေလား
ကြည့်ပါ .. $ နေတယ်ဆိုတယ် သေချာပါပြီ…. သင့် ကွန်ပျုတာကို
ဟပ်နိုင်နေပါတယ် ..ဘယ်လို ဟပ်မှာလဲဆိုတော့ run box မှာ
ခေါ်ပြီးတော့ အလွယ်တစ်ကူ ဟပ်သွားနိုင်ပါတယ် ဒီ default share ($)
တွေကို ဘယ်လို ဖြုတ်ရ
1.Start – Run – regedit … HKEY_LOCAL_MACHIE\_SYSTEM\_CurrentControlSet\_Services\_
Lanmanserver\_Parameters ကို Click ပါ။
2.ညာဘက်ရှိ Box ထဲတွင် AutoShareWks file ကို ရှာပါ။
မတွေ့ခဲ့လျှင် လွတ်နေသော နေရာတွင် Right Click – New – DWORD value
ကိုရွေးပါ။ New Value #1 ဆိုတဲ့ နေရာမှာ AutoShareWks ဟု ရေးပါ။
3.AutoShareWks file အား Double Click ပါ။
Value Data: အောက်ရှိ Box တွင်0( zero ) ဆို Default Shares
တွေကို Close တာ 1 ( one ) ဆို Default Shares တွေကို Open တာ၊
0 (zero ) ပေးပြီး OK ပေးပါ။
4. Restart ပေးပြီး Windows ပြန်တက်သောအခါ
Default Shares တွေကို ပိတ်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။
ကျွန်တော် သိတာလေး ပြောကြည့်တာပါနော်.. အဓိက ကတော့
ညီအစ်ကို မောင်နှမတို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကို ဖတ်ရှု့လေ့လာချင်လိုပါ
အားသာချက်၊ အားနည်းချက် ဘယ်လိုအကျိုး
hacker တစ်ယောက်ဆိုတာ ကွန်ပျူတာ
System တစ်ခုလုံးကို အရည်ကြိုသောက်ထား သူလို့မြင်ပါတယ်
ကျွန်တော် ကတော့ ကွန်ပျူတာကို အဆင်ပြေကိုက်
User အဆင့် ပေါ့ဗျာ …ဒါပေမဲ့ အလွယ်တစ်ကူနဲ့တော့
ခက်ခက်ခဲခဲ နဲ့ဟတ်လို့ရသွားလဲ ဟတ် ပေါ့ဗျာ
ဟုတ်ဘူးလား :P………………သင်ကြားပြသ ပေးကြပါဦး
အမှန်က အဲဒီ window မှာတင်ကတည်းက ပါတဲ့ $ တွေကို တစ်ခြားကွန်ပျူတာက ၀င်ကြည့်တယ်ဆိုတာ လုံးဝမလွယ်ပါဘူး။ ၀င်ဟက်ဖို့ဆိုတာ ဝေးပါတယ်။ ကျွန်တော်မသိတာလည်း ဖြစ်မှာပါ။ တကယ်လို့ ၀င်လို့ရသွားတယ်ဆိုရင်တောင် ဟတ်လို့ မရနိုင်သေးပါဘူး။ ၀င်းဒိုးမှာတင်ကတည်းက ပါနေတဲ့ $ တွေကို ၀င်ဖို့ အသုံးပြုခံရမယ့် ကွန်ပျူတာက လှမ်းပြီး အသုံးပြုမယ့်(သို့) ၀င်ချင်တဲ့ ကွန်ပျူတာကို admin right ပေးထားမှ ၀င်လို့ရမှာပါ။ ဒီတိုင်းဘယ်လိုမှ ၀င်လိုမရပါဘူး။ (ကျွန်တော်သိသလောက်ပါ။)
စက်တစ်ခုရဲ့ အိုင်ပီ၊ အဲဒီနောက်က partation$ (ဥပမာ- \_\_13.0.-.-\_D$) ဆိုပြီး ၀င်ကြည့်ပါ။ ( ဒီနေရာမှာ D ဆိုတာ computer ရဲ့ partation ပါ။ $နဲ့ share ပေးထားတဲ့ ဖိုင်မဟုတ်ဘူး။ $ နဲ့ ရှယ်ရာပေးတဲ့ နည်းကိုတော့ အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။)
၀င်လို့မရပါဘူး။ password တောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော် အဲဒီ password ကိုသိချင်လို့ အမျိုးမျိုး ကြိုးစားပြီး လိုက်မေးဖူးပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ အချိန်ကုန် လူပန်းပါပဲ။
ရိုးရိုးပဲ စဉ်းစားကြည့်လေဗျာ။ ဒါမျိုးကို Microsoft ကမသိပဲနေမလား။ ။ တကယ်လို့တာ
အဲဒီအတိုင်း ၀င်လို့ရနေရင် user တွေရဲ့ DATA တွေမှာ ဘယ်လိုလုပ် လုံခြုံမှုရှိတော့မှာလည်း။ ဒါမျိုးကိုလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတာက တစ်ခြားကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို admin အကောင့်သဘောမျိုးပေးပြီး DATA တွေရှယ်လို့ရအောင်ပါ။ အခုကျွန်တော်တို့ အပေါ်ကနေ ဆွေးနွေးသွားတဲ့အတိုင်း ၀င်ပြီး DATA တွေယူဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အရင် window version တွေကိုတော့ မပြောတတ်ဘူး။ XP S-2 ဆိုရင်တော့ လုံးဝမလွယ်ပါဘူး။ သေချာ တိတိကျကျ သိချင်ရင်တော့ ကိုရဲအောင်ကြီး ကိုမေးကြည့် ။ :D (ဟီးဟီး -မအားတဲ့လူကို အချွန်နဲ့ မလိုက်ပြီ)
ဖိုရမ်တွေ ဘလော့တွေမှာ တော်တော်များများရေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Default shares ပိတ်ထားချင်းဖြင့် အဟက်မခံရအောင် ကာကွယ်နည်းဆိုပြီး ပြောဆိုရေးသားနေကြပါတယ်။ ပြီးတော့ Default shares ပိတ်နည်းကို ရေးကြတယ်။
ဒါဆို ကျွန်တော်မေးမယ်နော်... Default shares ဖွင့်ထားတဲ့ စက်တစ်လုံးကို ခင်ဗျားတို့ ဟတ်တတ်လားဆိုတော့ .....(ဟိုလိုလုပ်ပါလား၊ ဒီလိုလုပ်ပါလား၊ ငါလည်းမလုပ်တတ်ဘူးတွေနဲ့ပဲ တိုးနေတယ်။)
ကဲ.. အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ သူတို့ ပြောတဲ့ Default shares ဆိုတာဘာလဲ ဆွေးနွေးလိုက်ရအောင်
သူတို့တွေ ပြောတဲ့ Default shares ဆိုတာ ၀င်ဒိုးက $ နဲ့ပေးထားတဲ့ partation တွေကိုပြောတာပါ။ c$, d$ စသည်ဖြင့် paration ရှိသလောက်ပေါ့။ အဲဒီ partation တွေကို ၀င်ချင်ရင် run box ကနေ // IP(၀င်ချင်တဲ့ စက်ရဲ့ IP ပါ။)/c$: စသည်ဖြင့် ၀င်လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ password တောင်းပါတယ်။ အဲဒီပတ်ဝေါ့က ဘာလဲ ဆိုတာ Default shares ပိတ်နည်းရေးတဲ့ ကျွန်တော်ဆရာ ဘလောကာများ မသိကြပါဘူး။ တော်တော်များများ သိချင်ကြတဲ့ အရာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီပတ်ဝေါ့က တကယ်ရော ရှိနိုင်ပါမလား။ ရှိတယ်ဆိုရင် ၀င်းဒိုးကြီးက လုံခြုံမှု မရှိဘူးပေါ့။ သို့လော သို့လော တွေးစရာတွေပါ။
အမှန်က microsoft wondow က ပေးထားတဲ့ အဲဒီ Default shares တွေက အခြားစက်ကနေ Guest အကောင့်ဖြင့် ၀င်သုံးချင်တဲ့ လူတွေအတွက်ပါ။
ကဲ မိတ်ဆွေရော အဲဒီလို သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မခက်ပါဘူး။ မိတ်ဆွေရဲ့ ကွန်ပျုတာ၊ ဒါမှမဟုတ် Default shares ပေးချင်တဲ့ ကွန်ပျူတာ ရဲ control panel ထဲက User account ထဲကိုဝင်ပြီး guest accout ကို ဖွင့်ပြီး password ပေးထားလိုက်ရင်ရပါပြီ။
ကျွန်တော်ရေးတာကို နားမလည်ဘူးထင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပုံမှန်ကွန်ပျူတာ အားလုံးမှာ Default shares ကအမြဲ ဖွင့်ထားပါတယ်။ ကြောက်လန့်ပြီး ပိတ်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေက လွဲလို့ပေါ့။ :P
Default shares ကို လှမ်းသုံးချင်တယ်ဆိုရင် ....
ဥပမာ- ကိုwhiteskyptz က ကျွန်တော့ကွန်ပျူတာထဲက Default shares ကိုလှမ်းသုံးချင်တယ် ဆိုပါဆို့...
ပုံမှန်အတိုင်းဆို အကိုလှမ်းသုံးလို့ မရပါဘူး။ ကျွန်တော်က Guest အကောင့်သုံးပြီး အဲဒီ Guest အကောင့်ကို ပတ်ဝေါ့ပေးထားမှ ရတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ အခုသုံးနေတဲ့ အကောင့်တွေက များသောအားဖြင့် Administrator right အကောင့်တွေနဲ့ limited အကောင့်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Guest အကောင့်သုံးတဲ့လူတွေ ရှားပါတယ်။
ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးက Guest အကောင့်ကို ဖွင့်ထားမယ်။ ပတ်ဝေါ့ ပေးထားမယ်ဆိုမှ ၀င်လို့ရတာပါ။ ၀င်တယ်ဆိုရာမှလည်း ကိုယ်က သူ့ကွန်ပျူတာကို ဘာမှ စွက်ဖက်ပိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး။ Data တွေ လှမ်းယူလို့ရယုံပါပဲ။
Related Posts: နည်းပညာများ
FacebookမှာLIKE လုပ်ပေးပြီး အားပေးကြပါဦး
အသစ်တင်သမျှ Facebook တွင်တွေ့မြင်လိုပါက အောက်မှာ LIKE လုပ်ပေးခဲ့ကြပါ။
အသစ် တင်သမျှ Email ဖြင့်ရယူလိုပါက
Powered By IT SuBoo
Huawei G610 နှစ်မျိုးလုံးကို မှန်ကန်တဲ့ Smart Zawgyi မြန်မာဖောင့်သွင်းနည်း(FOR Rooted Device)
Huawei G610S (G610-U00) နဲ့ G610 (G610-C00) ကို မှန်ကန်တဲ့ Smart Zawgyi မြန်မာဖောင့်သွင်းနည်း (FOR Rooted Device) 1. Downlo...
huawei Ascend G510-0010 Firmwareတင်နည်း( Build number-B165xxx rom)
Step 1 Download the boot.img from B165 rom. https://mega.co.nz/#!G8QCRYDA!Wy1773...lgV19TlCAvNsas Step2Download UnlockRoot http:/...
D Day စစ်‌တိုက်‌ဂိမ်း‌ unlimitted Glu Coin Hacked Apk+Data+patcher
D Day စစ်‌တိုက်‌ဂိမ်း‌လေးကို‌တောင်းဆိုထားလို့တင်‌‌ပေးလိုက်‌ပါတယ်‌။ တိုက်ခိုက်ရေးဝါသနာပါတဲ့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပါ။ ရုပ်ထွက်ကတေ...
ကွန်ပျူတာမလိုပဲ ဖုန်းထဲက နေ Root ကြမယ်100%Worked
ဖုန်းတွေကို Root တဲ့နေရာမှာ ကွန်ပျူတာကနေပဲ လုပ်နေရတာ အားလုံးအသိပါ။ ကွန်ပျူတာကို လူတိုင်းမကိုင်နိုင်၊မသုံးတတ်ကြပါဘူး။ Root Tool တွေရ...
Android app Book ပြုလုပ်‌နည်း စာအုပ်‌နှင့်‌‌ဆော့ဝဲ
‌တောင်းဆိုထားတဲ့စာအုပ်‌‌လေးထွက်‌‌ပေါ်လာပါပြီ။ ‌စောင်‌‌နေရတာကြာသွားရင်‌ခွင့်‌လွတ်‌‌ပေးကြပါ။ Android app Book ပြုလုပ်‌နည်းစာအုပ်‌‌လေးပါ ။ေ...
Youtube မှ ဗွီဒီယိုများကို မည်​သည့်​​ဆော့ဝဲမှမသုံးပဲ ​ဒေါင်းယူနည်းအသစ်
​ကွန်​ပျူတာ​ပေါ်ကပဲဖြစ်​ဖြစ်​ ဖုန်း​ပေါ်ကပဲဖြစ်​ဖြစ်​ youtube ဗွီဒီယို​တွေကို ​ဆော့ဝဲမသုံးပဲ​ဒေါင်းချင်​သူ​တွေအတွက်​ နည်းလမ်း​လေးပါ..။ အရ...
Facebook ပေါ်ကဗွီဒီယိုဖိုင်တွေ၊ဓါတ်ပုံတွေကို ပတ်မွှေပြီးဒေါင်းနိုင်မယ့် FB Downloader for android
ဒီတစ်ခါတော့ Facebook အသုံးပြုသူတွေအတွက် တကယ့် အလန်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါလေးက Facebook ကဗွီဒီယိုတွေကို ပတ်မွှေပြီးဒေါင်းနိုင်မယ့် ဆော့...
ကလစ် ၂ ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ ဖူးဗားရှင်းဖြစ်တဲ့ IDM 6.17...
ကိုယ်အပြင်သွားနေတုန်း ကိုယ့် File တွေကို Cut , Cop...
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ တယ်လီဖုန်း ခေါ်ဆိုခများကို ယခုဘ...
ဖုန်းထဲမှာ သူတစ်ပါးမကလိစေချင်တဲ့ app တွေကို lock ခ...
နည်းပညာဆိုဒ်များကို Offline မှာ တ၀ကြိး လေ့လာနိုင်ေ...
Google Play Store မှ Free Applications များကို ကွန...
ဂိတ၀ါသနာရှင်တွေအတွက်လာပြန်ပြီElectrum Drum Machine...
Windows Media Player ကို Android ဖုန်းမှာသုံးရအောင...
Android Tuner 0.9.7.6
အရိုးရှင်းဆုံး သီချင်းနားထောင်ရအောင် Nexmusic 2.5....
VCD ထဲက ကြိုက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကို ဖြတ်ယူထားလို့ရမယ...
ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအတွက် သီချင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့နှုတ်တွေကိုြ...
ဖုန်း မြန်နှုန်းကို သိသိသာသာမြှင့်တင်ပေးမယ့် Memory...
googletalk-setup for pc
နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်ကို free SMS ပို့လို့ရမယ့်Te...
Sim ကဒ် အခမဲ့၊ ဖုန်းခေါ်ခ ပြား၈၀ ဖြစ်မည်
Apex Launcher 2.0.3
Android ဖုန်းတွေမှာ IOS7 စတိုင်သုံးရအောင် Ultimate...
ဖုန်းထဲမှာ အသံမျိုးစုံပြောင်းလို့ရတဲ့Magic Voices
ဖုန်းထဲမှာ လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးနီးပါကို All-In-One...
ကွန်ပျူတာမှာ ဒိုင်ယာရီရေးလို့ရမယ့် PNote exe 884...
ဂီတ၀ါသနာပါသူတွေအတွက် ဖုန်းထဲမှာ Track 4မျိုးလောက် ...
swf(flash songs) တွေကို avi သို့ ပြောင်းပေးမယ့် sw...
mp3 cutter for PC 235.98 KB
ဖုန်းထဲမှာ Window 8 ပုံစံသုံးမယ့် Windows 8 for An...
လေချွန်ပြီး ဖုန်းပျောက်ပြန်ရှာနိုင်တဲ့ Whistle And...
ဖုန်းထဲမှာ Zip file ,rar file တွေကို ဖြည်နိုင် ၊ပြ...
(Siri for Android) Skyvi 1.13
ကွန်ပျူတာထဲက ဖိုဒါ တွေကို လော့ချထားချင်သူတွေအတွက်F...
Missed It! 4.0.4 apk
NTLDR Missing Error ဖြေရှင်းနည်း
ဖုန်းထဲက Memory စားနေတာတွေကို ရှင်းလင်းပေးမယ့်Memo...
ကျွမ်းကျင်ပြီး အရည်အချင်းပြည့်ဝသော အိုင်တီပညာရှင်တ...
Windows7administrator password hacking (၀င်းဒိုး...
သင့်ဖုန်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို မြှင့်တင်ပေးမယ့် A...
သံစဉ်တွေကို ချိန်ညှိပေးနိုင်မယ့် Equalizer 3.2.8
Glaxy S4 တွေကို Remote Control ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်...
Facebook Messenger 2.5.3
မြန်မာပြည်က မြို့တွေ့ရဲ့ ရာသီဥတုလည်း ကြည့်လို့ရတဲ့...
Frozen Zawgyi Keyboard Pro 0.5.3.apk
နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးဈေးကွက် ကို တွက်ချက်ပေးနိုင်တဲ...
ဖိုင်ဆိုဒ်သေးပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ Lightning ...
SMS တွေကိုတန်ဖိုးထားသူတွေအတွက် SMS Backup & Restor...
TTPod Player နောက်ဆုံးဗားရှင်း TTPod 5.5.0530
IT SuBoo စာရေးသူများ
Copyright © IT SuBoo | Powered by Blogger